सुपरस्टार अमिताभ वच्चन किसानहरुका लागि बने भगवान ! - Everest Dainik - News from Nepal
सुपरस्टार अमिताभ वच्चन किसानहरुका लागि बने भगवान !
बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनले किसानको ऋण तिरिदिएका छन् । उनले किसानको ४ करोडभन्दा बढी ऋण तिरिदिएका हुन् ।
मंगलबार अमिताभ बच्चनले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन् उनले १ हजार ३ तीन सय ९८ किसानकोे ऋण तिरिदिएर जिम्मेवारी उठाएका छन् । उनले लेखेका छन् ‘एक काम पूरा भयो ।’ सबै किसान उत्तर प्रदेशका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस २०१८ को सुरुवातसँगै बलिउडमा सलमानसँग भिड्दै छिन् ऐश्वर्या
उनको ब्लगका अनुसार यो रकम बैंक अफ इन्डियासँग सम्झौता गरेर तिरिएको थियो । उनले २६ नोभेम्बरमा आफैँले किसानहरुलाई बैंकको ऋण भक्तानको पत्र दिनेछन् ।
बच्चनले ऋण भूक्तानको पत्र दिनका लागि ७० जना किसानलाई मुम्बई बोलाएका छन् । उनीहरुलाई मुम्बई ल्याउनका लागि ट्रेनको एक डिब्बा बुक गरेको बताइएको छ । एजेन्सीको सहयोगबाट